नायिका आलिया भट्टलाई लाग्यो चोरीको आरोप ! – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/नायिका आलिया भट्टलाई लाग्यो चोरीको आरोप !
नायिका आलिया भट्टलाई लाग्यो चोरीको आरोप !
एजेन्सी– बलिउड अभिनेत्री आलिया भट्टलाई चोरीको आरोप लागेको छ । ‘प्राडा’ बोलको गीत सार्वजनिक भएको थियो । यो गीत मार्फत आलियाले म्युजिक भिडिओमा डेब्यु गरेकी छिन् । सोही गीतलाई नै चोरीको आरोप लागेको हो । पाकिस्तानी अभिनेत्री मेहविश हयातले आलियाले प्राडा गीत चोरेको आरोप लगाएकी छिन् । उक्त गीतको भिडियोलाई अत्यन्तै मन पराइएको थियो ।
मेहविशले ‘वाइटल साइन’ एल्बम्को ‘गोरे रंगका जमाना’ बोलको पाकिस्तानी गीतसँग आलियाको प्राडा गीत मिलेको बताएकी छिन् । उनले टुविट मार्फत आलियालाई गीत चोरीको आरोप लगाएकी हुन् । उनले लेखेकी छिन्, ‘यो निकै अजिब कुरा हो ।
बलिउडको हरेक कार्यक्रममा पाकिस्तानलाई गाली दिने गरिन्छ, तिरस्कार गरिन्छ । तर पनि पाकिस्तानको हरेक गीत चोरिन्छ । उनीहरुलाई कपीराइट उल्लंघन र रोयल्टीबारे केहि मतलब छैन ।’ यहि विषयले ले अहिले बलिउमा चर्चा पाएको छ । यसो त मेहविश बलिउड र हलिउडको अलाचना पछि नहट्ने गायिका समेत हुन् ।
स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन नेपाल एयरलाइन्सको विमान आज चीन जाँदै
चन्द्रागिरीमा केवलकार चढ्न यो दिन पैसा नलाग्ने
गाडी थन्किँदा ४५ लाखको गु’जारा सं’कटमा, असोज १ गतेदेखि चलाउने अनुमति नपाए एकलौटी सञ्चालन गर्ने चेतावनी